China Zonke izinto eziqinileyo ezenziwe ngesifuba seDraw kwigumbi lokulala igumbi lokulala # 0103 kunye nemveliso | Yamazonhome
Zonke i-Wood Solid Chest yeDrawers Igumbi lokulala Igumbi lokulala ebusuku # 0103
Igama: Isifuba sedrowa
Inombolo yomzekelo: Amac-0103
Ubukhulu: 600mm * 400 * 960mm
Isakhiwo se-Tenon kunye ne-tenon + isakhelo somthi oqinileyo
Izinto eziphambili ngum-oki omhlophe okhule iminyaka elikhulu. Inobunzima bokuqina, ubungakanani bokomisa umoya ophezulu, iipateni ezintle kunye nexabiso elifanelekileyo lokuqokelela. Ibanga le-FAS elingeniswe ngaphakathi i-oki emhlophe, njengenye yeendwalutho emthini, inokuqina okuzinzileyo kunye nozinzo, kwaye iyodwa Ukuthambeka okumile okwentaba okumile kwintaba kudlulisa ukomelela kunye nobushushu bendalo, kwaye umzimba wekhabhathi uphela uzinzile kwaye awunangxaki imvakalelo kwaye ihlala ixesha elide.
Unyango lokujikeleza ikona
Umsebenzi wobugcisa ojikeleze ikona
Imiphetho yekhabhinethi ijikelezwe kwaye ijikelezwe ukuthintela ngokufanelekileyo ukungqubana komonakalo. Umphezulu wangaphakathi nangaphandle ufafazwa nge-varnish, anti-corrosion kunye nokuxhathisa kwamanzi, i-360-degree degree ngaphandle kweekona ezifileyo, kwaye imbonakalo iyafana. Uyilo olulula luhlala lukwazi ukumelana nokupholishwa kwexesha, kunye nemigca ecocekileyo, umbala ocacileyo nolula, Isitayile esikhethekileyo, esigcwele ubuncinci beNordic.
Isibambo sobhedu esikumgangatho ophezulu
Iidrowa zeenkuni ezomeleleyo ezineziphatho zobhedu zilula kwaye ziyabukeka. Emva kwamaxesha angama-50 wokucoca ngononophelo, umphezulu ogudileyo ngaphandle kwebarb, umphathi wokuvavanywa uphinde waqinisekisa amaxesha ali-15, esenza ulwabiwo olucacileyo. Imiphetho yedrowa igcinwe ngokudityaniswa kwamalungu, ngokuchanekileyo nciphisa umsantsa, uthintele ngokufanelekileyo iinkuni ekuqhekekeni nasekukhuleni. Isibambo sobhedu esiqingqiweyo somelele ngakumbi kwaye akukho lula ukurusa.
Iidrowa ezininzi ngobukhulu obahlukeneyo
Uyilo lweedrowa ezininzi, umsebenzi wokugcina onamandla, kunye nalo, ikhaya lihlala licocekile kwaye licocekile ngephanyazo. Ibhodi enkulu ithe nkqo kwaye nezinto zigcwele, kwaye akukho bhodi yokudibanisa yomnwe, enokugcina izinto kunye neencwadi, kwaye inamandla okusebenza. Ingasetyenziswa njengekhabhathi yedrowa esecaleni kwebhedi, iikhabhathi zeTV kwigumbi lokulala, igumbi lokuhlala kwiikhabhathi ezisecaleni kumabonakude, ezinamaqhekeza ahlukeneyo kunye nezigidi zokusetyenziswa. Indawo yedrowa yabucala ikunika imvakalelo epheleleyo yokhuseleko.
Umgaqo kaloliwe osisikhokelo somthi unamandla okumelana nokunxiba
Umgaqo oqinileyo wesilayidi somthi, ikhadi lesilayidi elityibilikayo, ukuzoba okuthe tyaba, ukukhanya kunye nokuthula, akukho lula ukukhulula, ukuhlala ixesha elide kunye nokunganyangeki. Indawo yekhadi isikwe ngokugqibeleleyo, umzobo awunamathele, ukonga ixesha kunye nomzamo, kwaye kulula ukuthatha.
Izinto ezisebenzayo zemilenze yekhabinethi yomthi eqinileyo
Imilenze eshinyeneyo yekhabhathi yeenkuni izinzile kwaye ayityibiliki, yomelele kwaye yomelele. Landela umxholo woyilo wegumbi lonke kunye noyilo lweseti yezisombululo ezifanayo kwindlu yakho entle ngenjongo yefashoni kunye nezinto ezahlukeneyo. Ezantsi kunoyilo olungatyibilikiyo kunye nolunxibayo, olwenza ukuba kube lula ukutyhala kunye nokutsala. Ayizukuchaphazela abanye, ikhusele umgangatho kwaye yandise ubomi benkonzo kwikhabhinethi.
Egqithileyo Umzobo we-yoga wokudanisa umthambo we-inflatable track track 0384
Okulandelayo: I-Oak Wardrobe Ukuthula okungcolileyo kwesilayidi soLoliwe esiTyibilikayo kwiWardrobe Igumbi lokulala Ifanitshala # 0108
I-Bohn Hut yenze indlu yeenja zezinja
I-Unitarp edadayo ye-Yoga Mat yabantu abadala ...
Isitayile saseJapan esilula esimhlophe esimhlophe esidityanisiweyo ...
Amaxesha amane amaWicker ashushu aFudumeleyo anokusetyenziswa ...